Beesha Caalamka Oo Go’aan Ka Gaadhay Cabashadii Beelaha Hawiye | Calanka Somalia
← Faroole Garowe Gooso Not Puntland
Nin adduunya joogoow maxaa aragti kuu laaban! Horaa loo yiri, marna miyaad is tiri WARAABAA la cuni doonaa – Waraabaha Maxaa Xiga!? →
Beesha Caalamka Oo Go’aan Ka Gaadhay Cabashadii Beelaha Hawiye
22 August, 2012 – Iyadoo Maalintii Shalay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Magaalada Muqdisho ay gaareen Odoyaal ka soo Jeeda Beelaha hawiye korna u dhaafayay Illaa Toddobaatan Oday iyo Dumarba ayaa waxaa arrintii Cabashadooda la sheegay in wax laga qabanayo.
Odoyaashan ka soo jeeda Beelaha hawiye oo ay wehelinayeen Tiro Dumar ah ayaa Maalinimadii Shalay gaaray Xafiiska Wakiilka Qaramada Midoobay ee magaalada Muqdisho kuwaasoo ka cabanayay joojintii Xildhibaano ka soo jeeda beelahaas laga hor joogsaday inay ku Biiraan Xubnaha Cusub ee Barlamaanka Soomaaliya.
Odoyaashan oo Xafiiska qaramada Midoobay gaaray ayaa halkaa ka gudbiyay Cabashadooda ku aaddan in la oggolaado 38 Xubnood ee Guddiga farsamadu ka hor joogsaday in ay ka mid noqdaan Barlamaanka Cusub oo Soomaaliya.
Odoyaashan ayaa sidoo kale ka Cowday Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya cabdiweli Maxamed Cali Gaaz oo ay ku Eedeeyeen in isagu uu yahay Ninka qaska ka wada gudaha Magaalada Muqdisho.
Odoyaasha ayaa ka codsaday Ergayga qaramada Midoobay ee Soomaaliya Mahiigga in uu wax ka qabto Cabdiweli Maxamed Cali Gaaz oo ay sheegeen in uu doonayo in Soomaaliya ay dib ugu noqoto Sanadkii Sagaashameeyadii ee ahaa dagaaladii Ahliga ahaa waa sida ay hadalka u dhigeenee.
Ergayga Qaramada Midoobay ayaa sheegey in wax laga qabanayo Cabashada odoyaashan isla markaana Beesha Caalamku ay aqbali doonto in Xildhibaanadaas hore looga hor joogsaday in ay Barlamaanka ku biiraan la Oggolaan doono isla markaana ay ka mid noqon doonaan Xubnaha Cusb ee Barlamaanka.
Dr Mahiigga oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in Madaxweynaha Soomaaliyana uu noqon doono ama Jagadaas uu qaban doono Nin ka soo jeeda Beealaha hawiye si Magaalada Muqdisho Nabadda ka bilaaban tay ay u sii waarto.
Wararka u danbeeya ayaa sheegaya in Dr Mahiigga uu Maanta kulanla leeyahay Guddiga Farsamada isagoona kala hadlaya sidii wax looga qaban lahaa Cabashada ka soo yeertay Odoyaasha ka soo Jeeda Beelaha hawiye.
Si kastaba kulanka uu maanta la leeyahay Mahiigga Guddiga farsamada ayaa lagu wadaa inuu ku qanciyo Guddigaas sidii ay u Oggolaan lahaayeen Xubnihii Beeshaas ka soo jeeday ee Hore uu Gudigaas isaga hor Istaagay ku soo Biiritaankooda Barlamaanka Cusub ee Soomaaliya.